CAJIIB: Taageere Man United Ah Oo Jawaab Caan Ka Noqotay Barta Twitter-ka Siiyay Jamaahiirta Kooxda Liverpool Ee Ku Faanay Inay Gaadheen Dhibcihii Abid Ugu Badnaa Ee Sir Alex Ferguson Ku Qaado Horyaalka. - Gool24.Net
CAJIIB: Taageere Man United Ah Oo Jawaab Caan Ka Noqotay Barta Twitter-ka Siiyay Jamaahiirta Kooxda Liverpool Ee Ku Faanay Inay Gaadheen Dhibcihii Abid Ugu Badnaa Ee Sir Alex Ferguson Ku Qaado Horyaalka.
April 30, 2019 Apdihakem Omer Adem
Mid kamid ah jamaahiirta kooxda Manchester United ayaa jawaab caan ka dhex noqotay barta Twitter-ka siiyay qoraal ay soo daabaceen jamaahiir Liverpool ah oo ay ku faaneen inay gaadheen dhibcihii ugu badnaa ee abid uu horyaal ku qaado Sir Alex Ferguson.
Haddiiba ay Liverpool xilli ciyaareedkan ku fashilanto inay ku guuleysato horyaalka ayay isku tix gelin doonaan kuwo nasiib darro weyni haleeshay marka loo eego maqaamka ay gaadheen.
Kooxda Jurgen Klopp ayaa haatan haysata 91 dhibcood waana dhibco ay ku qaadi lahaayeen 20 kamid ah 26 kii jeer eee ugu dambeeyay ee horyaalka lagu kala guuleystay.
Reds ayaa dhaafan dhibcihii kooxdii guuldarro la’aanta horyaalka ku qaaday ee Arsenal sanadkii 2003-04, Kuwii Leicester City ee 2015-2016 iyo kooxdii saddexleyda kuwada guuleystayay 1998-99 ee Manchester United.
Xaqiiqdii Liverpool ayaa bar-baraysay rekoodhkii ugu fiicnaa ee SAF uu Man United ugu hoggaamiyay horyaal sanadkii 1999-2000 oo ahaa 91 dhibcood isla markaana ay 18 dhibcood oo saafi ah ka sarreeyeen Arsenal oo labaad ku dhammaysatay.
Taas ayaa dhalisay in jamaahiirta Liverpool ay ku faanaan inay gaadheen dhibcihii abid ugu badnaa ee Ferguson balse qoraal Twitter ah oo uu kusoo jawaabay taageere Man United ah oo kusoo gala magaca @Unitedology ayaa noqday mid caan ah.
Qoraalka Unitedology ayaa odhanayay “Booska ugu fiican ee Sir Alex abid galay waxa uu ahaa 1-aad, 13 jeer”
Hadalka akhristahan ayaa laga dhex akhrisan karaa in muhiimadu aysan ahayn dhibcaha balse ay tahay ma haysataa horyaalka dhammaadka xilli ciyaareedka.
Tweet-kan ayaa noqday mid dib loo daabacay (Re-Tweet) 12,000 oo jeer halka 43,000 oo Like ay gaadhsiiyeen shaqsiyaadka arkay.
Dhibcaha haatan ay Reds ku haystaan horyaalkoo 91 dhibcood ah ayaa loo aanayn karaa tartanka horyaalka oo sii adkaaday balse waxa ay wali hal dhibic ka dambeeyaan Manchester City.